Eyona ndlela ilungileyo yokunyusa amabanga okanye iintlanzi ezincinci | Ngeentlanzi
Njengokuba kukho ii-aquariums zentlanzi, kukwakhona ii-aquariums zeeprons. Kule meko ibizwa i-shrimp. Eyona nto ixhaphakileyo kukuba kwimeko yokungcakaza azenzeki ngamanye amaxesha ngenxa yezizathu ezahlukeneyo. Esona sizathu saziwayo kukuba iintlanzi ezininzi zitya i-shrimp ukuze singakwazi ukuzigcina kakuhle. Zininzi iintlobo ze-shrimp kwaye nganye ineempawu zayo ezizodwa.
Ke ngoko, siza kulinikela eli nqaku ukuba likuxelele yonke into ekufuneka uyazi malunga ne-shrimp kunye neempawu zayo.
1 Eyona shrimp ilungileyo
2 Yintoni i-shrimp
3 Zeziphi iintlanzi ezifanelekileyo ifrimp
4 Bufuna liphi iqondo lobushushu iiprawn?
5 Ngaba unokufumana istrimp esaneleyo?
6 Isikhokelo sokukhwela i-shrimp
6.4 Sesiphi isihluzi esiza kusetyenziswa kwi-shrimp
6.6 Zeziphi izityalo endinokuzibeka kwi-shrimp?
7 Kuphi ukuthenga ikiti ye-shrimp
Eyona shrimp ilungileyo
Sweetypet Aquarium Seti...
I-Blau Aquaristic Cubic ...
Ulwandle Simahla AT560A Nano ...
Tetra Acuario Duo...
I-prawn yi-aquarium ekhethekileyo esetyenziselwa ukukhula kunye nokugcina ii-prawns. Uninzi lwee-prawns eziziswe kwi-aquarium zisisiphumo sokungxunyaniswa kweentlobo ezahlukeneyo, kwaye imibala eqaqambileyo iyenza ibe nomtsalane. Ngokwemvelo, umbala wee-prawns ungabanceda ukuba bazifihle, kodwa hayi kwiindawo zasemanzini. Le meko ibangela ukuba iintlanzi zihlale zibaphazamisa, ukuba zihlala zifihliwe kwaye zixinekile, kwaye ngekhe sibunandiphe ubukho bazo.
Kananjalo, ukuba siyakwazi ukuvelisa kwakhona kwezona meko zintle, intlanzi yolutsha iya kutyiwa yintlanzi.
Zeziphi iintlanzi ezifanelekileyo ifrimp
Nangona kunjalo, kukho iintlobo ezithile zeentlanzi ezifanelekileyo kwi-shrimp. Nokuba ukhetha luphi uhlobo lwe-shrimp, kubalulekile ukuba xa ukhetha intlanzi ukuba uyibeke kwi-aquarium enye, Kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba ezi azifanelanga ukuba zinkulu kakhulu okanye zibe ndlongondlongo. Umzekelo, unokukhetha isampulu yohlobo lwe-Galaxia microrasbora, kuba umbala wayo unika i-shrimp ubomi obuninzi, okanye unokukhetha intlanzi yeentlobo ze-Guppy.
Ewe kunjalo, imeko efanelekileyo yeyokubahlulahlula iimazi kuba zinkulu kunamadoda. Kananjalo kuya kufuneka wazi ukuba xa ufaka ezi ntlanzi kwi-aquarium yakho, Iimbumbulu zakho aziyi kukhuseleka nge-100%. Ukuba zinezityalo ezigqibeleleyo, unokuzisa iintlanzi. Le yimeko ye-otocinclus, i-ancistrus kunye ne-pletoscomus. Iintlobo IGyrinocheilus aymoniere Ikwayindlala, kodwa inokukhula iye kufikelela kwi-15 cm, ke ziyacetyiswa kuphela kwiindawo ezinkulu zasemanzini. Okokugqibela, singathanda ukuphawula ukuba iintlanzi zomhlaba nazo zikulungile kuba nangona zizii-omnivores, azabelani ndawo ngeeprns ezibekwe embindini nasezantsi kwinxalenye ye-aquarium. Ke ngoko, banokuba ngumbono olungileyo ngeshrimp.
Bufuna liphi iqondo lobushushu iiprawn?
Nangona uninzi lwee-prawns zilungile kubushushu begumbi, kungcono ukufaka i-heater gcina ubushushu obuzinzileyo be-24 ukuya kwi-26 degrees. Kungenxa yokuba uninzi lwamagumbi afumana utshintsho kubushushu emini (umahluko phakathi kwemini nobusuku, ukuvulwa komnyango, njl. Ezi oscillation zichaphazela nobushushu be-aquarium, kwaye ukuba umahluko mkhulu kakhulu, unokubangela iingxaki. Emva kwayo yonke loo nto, i-shrimp ayiphenduli kakuhle kutshintsho olukhawulezileyo kwindalo esingqongileyo.
Ngaba unokufumana istrimp esaneleyo?
I-shrimp inokuzimela kwaye inazo zonke izixhobo eziyimfuneko. Ukwenza oku, kufuneka ufumane izihluzo ze-substrate, i-heater, ukutya ngokuqhubekayo, ithemometha ukufudumeza nokulungelelanisa iqondo lobushushunjl. Ezinye izinto eziyimfuneko luvavanyo lwe-shrimp olusinceda sibone ukuba zonke izinto zikwimeko efanelekileyo, imitha ye-TDS kunye nomhombiso wokulungelelanisa ukuthanda kwethu.
Isikhokelo sokukhwela i-shrimp
Njengoko besesitshilo ngaphambili, kufuneka sibe nazo zonke izinto eziyimfuneko ukuze i-shrimp isebenze kwiimeko ezilungileyo. Ke ngoko, siza kushwankathela yonke imiba ekufuneka siyithathele ingqalelo:
Ngokwesiqhelo, xa sithetha ngee-aquariums kuhlala kusithiwa "inkulu ngcono", esebenza ngakumbi ekulimeni i-prawns kunezinye iintlobo ezininzi. Kukhulu ngakumbi ngcono. Nangona ungaqala ukukhulisa i-prawns kwi-aquarium enee-15 okanye ezingama-20Kucetyiswa ukuba uqale ngetanki elikhulu leentlanzi. Ukuqala ngeencwadi ezingama-40, uya kuba nendawo eyoneleyo yokugcina iiprawn, kwaye kuya kuba lula kakhulu ukusombulula iimpazamo ezenziwa ngabaqalayo.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, ii-prawns azimelani kakuhle kutshintsho lokusingqongileyo, ngenxa yoko kufuneka kuqinisekiswe indawo apho ikhoyo ukuhla kwamaqondo obushushu nokwehla kwelanga akunabungozi. Igumbi elingenalo uyilo oluninzi kunye nokukhanyisa okuzinzileyo kungaphezulu ngokwaneleyo ukubeka i-shrimp.
I-substrate yenye into ekufuneka ithathelwe ingqalelo ukugcina i-prawns esempilweni egqibeleleyo kwaye ibanike owona mbala ubalaseleyo. Unokukhetha nawuphi na umbala we-substrate, kodwa uninzi lwabalimi be-shrimp bayavuma ukuba umbala ngowona mnyama. Yenza imidumba kunye nezityalo zigqame ngaphezu kwawo nawuphi na umbala. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zezivumelwano zabo:
Gravel okanye isanti-Ukuba usaqala kwaye ucwangcise ukusebenzisa izityalo ezingafunekiyo, ukudweba okumnyama kuya kuba lukhetho olufanelekileyo kuwe. Iya kuba lula ukugcina iiprawn ngaphandle kwebhokisi.
Umtya wodongwe: Kukho umhlaba ongaphantsi, kwaye udongwe olusetyenziswa ziiprawn lunamandla 'okudambisa'. Oku kuthetha ukuba banokukunceda ugcine i-pH esezantsi kunye namanzi athambileyo, uninzi lweentlobo zeeprawn ezithandayo, ngakumbi ezikhethiweyo ezinje ngeCaledins. Ikwakhuthaza ukukhula kwezityalo kuba zityebile kwizakhamzimba.
Sesiphi isihluzi esiza kusetyenziswa kwi-shrimp
I-Eden 501-Icebo lokucoca ulwelo ...
Yonke i-aquarium ifuna icebo lokucoca ulwelo, ukuba ufuna ukunyamekela ii-prawns zakho kwaye ufumane iziphumo ezilungileyo, icebo lokucoca ulwelo kubalulekile. Isihluzi asisusi kuphela inkunkuma edadayo, ikwalikhaya kwiibhaktheriya ezibalulekileyo eziluncedo, ukuvumela i-aquarium yakho ukuba ikhule ibe yindawo ephilileyo yendalo. Kukho iintlobo ezininzi zeefilitha ze-shrimp, nganye inezibonelelo kunye nezinto ezingalunganga. Uhlobo lwecebo lokucoca ulukhethe luxhomekeke kwiilitha ze-aquarium yakho. Okona kubaluleke kakhulu, isihluzo sikhuselekile kwi-aquarium ye-aquarium.
Icebo lokucoca ulwelo: othandwa kakhulu ngabalimi be shrimp. Isiponji sokucoca ithambile kwaye ikhuselekile kwi-100% kwiiprawn. Zibaleka emoyeni kwaye zibaleka kwiimpompo zomoya. Ukuba i-aquarium yakho inkulu kuneelitha ezingama-30, unokufuna ukukhetha into enkulu.
Icebo lokucoca ulwelo langaphakathi: olona khetho lokucoca luthandwayo lwabaqalayo.
Icebo lokucoca ubhaka-Ukuba awufuni ukubeka isihluzo esibi kwi-aquarium, ezi zilungile- njengoko igama lisitsho, ungayixhoma ngasemva. Itsala amanzi ngombhobho wokungena, idlule kwigumbi lokucoca, emva koko ibuyisele amanzi kwitanki ngenkqubo yecascade. Ukuba ufuna ukusebenzisa enye yazo, uyakufuna isikhuseli sokucoca ulwelo, ngapha koko uya kuthi gwenxa ugqibe iiprawn.
Iifilitha zangaphandle-Ukuba ufuna ngokwenene umgangatho wamanzi, le yeyona nto ilungileyo kuba zinkulu kwaye zinamagumbi amaninzi okucoca izixhobo. Nangona kukho izihluzi zangaphandle ze ii-nano aquariums. Olu hlobo lwecebo lokucoca ulucetyiswa kwii-aquariums ezingaphezulu kweelitha ezingama-60.
Ukukhanyisa kubalulekile. Uninzi lwe-shrimp lunokukhanya kwe-LED ngemibala eyahlukeneyo. Kuya kubakho iimodeli ezikuvumela ukuba uguqule imibala kunye nokuqina. Oku kushiyelwa incasa yomthengi.
Zeziphi izityalo endinokuzibeka kwi-shrimp?
Nangona abanye abalimi be-shrimp bathanda ukugcina ii-shrimp ezingenanto ukuze zibonwe ngokulula, unokufuna umhombiso kuseto. Imidumba yakho iya kuyithanda le nto, njengoko zizilwanyana bathanda ukuba neendawo ezininzi zokuzimela. Oku kuyinyani ngakumbi xa besandula ukuluchitha ulusu lwabo, kuba lubenza babe sesichengeni kwaye bafuna ukufihla kude kube lukhuni lomhlaba wabo omtsha.
Enye indlela yokudibanisa ukuhombisa kunye nokusebenza kukusebenzisa uninzi lwezityalo zendalo kunye ne-moss. IBiofilm ikhula emagqabini, elenza ukuba isityalo sibe yindawo ephambili yokondla i-shrimp. Ukongeza, izityalo zinceda ukuzinzisa umgangatho wamanzi ngokufunxa inkunkuma eyingozi kunye nokuguqula i-aquarium yakho ibe yindawo entle yendalo.
Siza kudwelisa ezinye zezona ntlobo ziphambili zokutyala okucetyiswayo ngeshrimp:
Ubulembu beJava (IVesicularia dubyana)
Ubusuku beKrisimesi (IVesicularia montagnei)
Ubulembu baseTaiwan (Ukutshintshwa kwetaxiphyllum)
IPhoenix Moss (IFissidens fontanus)
I-Flame Moss (iTaxiphyllum sp.)
Iletisi yamanziUSalvinia wacaphuka)
Idadaweed (I-Spirodella intermedia)
Ifeni yeJava (IMicrosorum pteropus)
I-Foxtail kunye ne-Water Millefeuille
URiccia (URiccia fluitans)
IPellia (Itonereum yeMonosolenium)
Kuphi ukuthenga ikiti ye-shrimp
Kukho indawo ezininzi kwi-intanethi nakwiivenkile ezibonakalayo apho unokuthenga khona i-shrimp yakho. Nangona kunjalo, ezi ndawo zezona zicetyiswayo:
Amazon: KwiAmazon awuyi kufumana kuphela i-shrimp efanelekileyo kwisitayile sakho, kodwa nazo zonke izinto eziyimfuneko ukuze isebenze ngokufanelekileyo. Ukongeza, inokukhululeka kokuthatha yonke into iye ekhaya kwaye ziyimveliso esemgangathweni. Ungazibona izimvo zabanye abathengi ukuze ubone ukuba yeyiphi imodeli ekufaneleyo.
Indawo yokuhlala: Nangona ivenkile ekhethekileyo kwiimbovane, zikwabonelela ngeemodeli ezithile ze-shrimp kunye nezinye iintlobo ze-shrimp ezinokuchuma kwezi ndawo zendalo.
Kiwok: Yivenkile engafunekiyo yezilwanyana kunye nezilwanyana zasekhaya. Inayo zombini ivenkile ebonakalayo kunye ne-intanethi kwaye bayacebisa ngokobuqu ukuba zeziphi ezifanelekileyo iimeko zakho. Amaxabiso ayahluka ngokuxhomekeka kwimodeli kwaye iwaranti ilungile.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga nokugembula, iimpawu zayo kunye nento ekufuneka unayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » IGambario